အတင်းလည်းမဟုတ် ၊ သတင်းလည်း မဟုတ် :D | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Gossip, Rumor » အတင်းလည်းမဟုတ် ၊ သတင်းလည်း မဟုတ် :D
အတင်းလည်းမဟုတ် ၊ သတင်းလည်း မဟုတ် :D
Posted by etone on Aug 27, 2012 in Gossip, Rumor | 47 comments
etone ဘ၀ တစိတ်တပိုင်း နာနဲ့ မတွေ့အောင်ရှောင်ကြဘာ ခွိခွိ
မနေ့က ပိတ်ရက်မှာ မိသားစုနဲ့ ထိုင်နေကျ ကော်ဖီဆိုင်လေးမှာ အေးအေးလူလူ ကော်ဖီထိုင်သောက်ရင်း အရှေ့ဝိုင်းက အတွဲ တစ်တွဲကိုမြင်ရတာ အတော်လေး အခြေနေဆိုးနေတာနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်မဓါတ်ပုံ ဓါတ်ပုံရိုက်မှန်း လည်း သူတို့မြင်ပါတယ် ။ မြင်လို့ပဲ ပိုဆိုးလာသလား မပြောတတ်တော့ပါဘူး ။ မိသားစုနဲ့ သွားထိုင်လို့ မျက်နှာပူပြီး ထားစရာနေရာတောင်မရှိပါဘူး ။ အမေကတော့ ပြောပါတယ် ….. ငါ့သမီးကိုသာ အပြင်မှာ အဲ့လို မြင်ရလျှင် ၊ ရှက်လွန်းလို့ သေမှာပဲတဲ့ …… ။ ဒီခေတ်မိန်းကလေးတွေများ ထိန်းမနိုင် သိမ်းမနိုင်နဲ့တဲ့ ……. သမီးတစ်ကောင် နွားတစ်ထောင်ရယ်ဆိုပြီ … တီးတိုးညီးတွားသံလေးကြားလိုက်ရတယ် ။သူ့သမီး အဖြစ်မရှိတာကို ၊ အထင်ကြီးတတ်တဲ့ အမေ့ကိုလည်း ..အားနာနာနဲ့ပဲ ပြန်ပြုံးပြမိပါတယ် ။
ဓါတ်ပုံက ပထမအကြိမ်ရိုက်တော့ ဖလက်ရ်ှကို မပိတ်လိုက်မိဘူး…. မီးပွင့်သွားလို့ သိသွားတယ် … ပြသနာရှာခံရပြီထင်တာ ။ ဂရုတောင် မစိုက်ဘူး ။ အရိုက်ခံမယ့် အတူတူနေရာကနေထပြီး သူတို့ ရှေ့တည့်တည့်သွားရိုက်ချင်စိတ်တောင် ဖြစ်မိပါတယ် ။
ဆိုင်က မှောင်လည်း မမှောင်ပါဘူး … အတွဲတွေချည်း ခိုနေတဲ့ ဆိုင်မျိုးလည်း မဟုတ်ဘူး ။ မိသားစုအလိုက်ရော ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရော လာထိုင်ကြပါတယ် ။ ကောင်မလေးကြည့်ရတာလည်း လှလှပပလေးပါပဲ ။ သူ့ပုံစံ အကဲခတ်ကြည့်ရတာတော့ ကြေးစားအတန်းထဲက ပုံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး ။
ဘေးက၀ိုင်းတွေကို ရှိတယ်လို့တောင် သဘောမထားပဲ ..သူ့ကိစ္စသူလုပ်ပြီး ထသွားတော့မှ …… ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတော့တယ် …၀တ်ထားတဲ့ ဂါဝန်က ကျောကိုပြောင်နေတာပါ ….. မြီးညှေင့်ရိုးအထိကို ကျောဟိုက်ထားတာ … တော်ရုံမိန်းမ မ၀တ်ရဲတဲ့ပုံမျိုးပါပဲ ….. ။ (အဲ့ဒီဂါဝန်ဝတ်ပြီး ဘတ်စ်ကားသာစီးကြည့် … ဟိဟိ ) ။ ဒီလောက်တောင် ရဲတင်းနေမှတော့ ၊ ပါ့ဘလစ်နေရာမျိုးမှာ ဒီလိုနေတာလည်း သူတို့အတွက် အဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ … ။ သူလည်း သူ့သဘောနဲ့သူ အကျီ င်္ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝတ်တယ် ၊ နေချင်သလိုနေတယ်ဆိုတော့ …… အဟိ ……. ကျွန်မလည်း ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် … လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရိုက်တယ် ၊ တင်ချင်သလိုတင်တယ်ပေါ့နော် ….. ။ ရွာထဲက တစ်ယောက်ယောက်များ ဖြစ်နေမယ်ဆိုလျှင်တော့ … ပုံပြန်ဖျက်ပေးပါမယ် … ဟိဟိ
အားနာလို့ တခြားပုံလေးတွေ မတင်တော့ဘူး… ။
ဒါမျိုးဆို မိုင်နှစ်ဆယ်ကနေ တိုင်ကွယ်နေလည်း မြင်ရပါဧ။် … ခွိခွိ
စိန်ပေါက်ပေါက် အလုပ်တွေရှုပ်နေတာ ဒါ့ကြောင့်ကိုးးးးးးးးးးးးးးးးးး
အူးမတ်ကြီး ရွာထဲမှာ ပျောက်လှချည့် ထင်နေတာ ခုတော့ သိသွားပြီ။
မသိလို့မေးတာ လား ……………….
အဲဒီလူတွေကလည်း ဖြစ်လိုက် ဆရာမ အီးတုံး ရှေ့မှာ ပဲလာလာဖြစ်နေကျတယ်။ အဟိ..။ ဘာပဲပြောပြော လက်သွက်တယ်လို့ပဲပြောချင်တယ်။
တို့ညီမလေးနဲ့မှ တွေ့ရက်လေတယ်.. ဂယ်ပဲ… လူတွေကတော့ မပြောပြောချင်ပါဘူးညီမလေးရယ်။
ဒီအတွဲကတော့ ကံကောင်းမလိုလိုနဲ့ကံဆိုးသွားရှာတာပါလား
ကျုပ်သာမိန်းမ ယူဖို့ အလုပ်မရှုပ်နေရင်တော့လားဗျာ
ဒါမိုးတွေ့ လို့ကတော့ ဟွန့်
ပြောရအုံးမယ် အရပ်ကတို့ရေ.. ကိုဂီကမိန်းမယူမှာမဟုတ်ဘူး ယောင်္ကျားယူမှာ.. နေ့လည်ကသူ့ကိုမေးတယ် ကျွန်တော်တို့ အရင်အလုပ် ယောင်္ကျားစိတ်ပေါက်နေတဲ့ကောင်မလေးနှင့် ယူမှာတဲ့.. သူရဲ့ချဉ်ထှာလေးတော့ အသဲကွဲပါပြီ.. သူများနောက်ပါတာထက် ပိုဆိုးတယ်.. ကိုယ်ရည်းစားဘ၀ပြောင်းသွားတာကိုး
ကျမတို့နားက Parisian မှာဆိုရင်မမြင်ချင်မှအဆုံးပဲ.. မိသားစုတွေလာတဲ့ဆိုင်မျိုးပေမယ့်သူတို့တွေ ပိုများနေတယ်. သူတို့ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုလုံးဝစိတ်ထဲမထားပုံပဲ..
သူရို့မို့ မရှက်တယ် ..
ဒါ့ပုံရိုက်မှန်း မြင်တာတောင် ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတော့ ..
ဝါကတော့ နည်းလောက်ဘူး … ထင်တယ် ..
ဒါနဲ့ စကားမချပ် ..
ဟို ဝါကျင့်ကျင့် အရောင်နဲ့ ဖန်ခွက်က ဘာတုန်းဂျ ..
အေးနော် ရေခဲတုံးလေးတွေရောပါတယ်ဟ :grin:
ကို ခင်ခ says:
(—-ဓါတ်ပုံက ပထမအကြိမ်ရိုက်တော့ ဖလက်ရ်ှကို မပိတ်လိုက်မိဘူး…. မီးပွင့်သွားလို့ သိသွားတယ် … ပြသနာရှာခံရပြီထင်တာ ။ ဂရုတောင် မစိုက်ဘူး ။——)
မအိတုံရေ လိပ်စာပေးပြီး ပုံတွေကူးပြီးရင် ပို့ပေးပါလား ပြောမသွားတာဘဲ၊
မ etone ရေအခုခေတ် လူငယ်တွေက International တွေဖြစ်လာကျပြီ ဆိုတော့ မရှက်ကြတော့ဘူးပေါ့
တစ်ဆိတ်လောက် မေးပါရစေဂျ ..
ဟိုလေ .. ဟို .. ဟို ..
ဂျီးဒေါ်ဂရော အင်တာနေချင်နယ် လားဟင်င်င် ..
si tone က မရှက်တတ်ဘူးလား ဥဥနဲ့တွေ့ရင် ရှက်တတ်အောင်သင်ပေးမယ် လာဂဲ့မလား
ဥဥက ဘာလာလာဒေါင်းတယ်နော် :cool:
နင်က ဂျိုကာ ကိုင်ထားတာပေါ့နော် ..
ဒါမှ အမှန်အကန် .. စီဂျေ ။ အမှတ်တမဲ့မှ အမှတ်တရပေါ့ ။
Naked Prince ကမှ မြင်ရတာ သူတို့ ထက် ပိုပြီး တင့်တယ်ပါသေးတယ် လို့ ပြောရင် လွန်များ သွားမလား။
ကျွန်တော့်အနေနှင့် ဆရာမဒေါက်တာနီးတုံးကို ပြောခြင်တာက
မိမိကိုယ်မိမိဒုက္ခပေးသလိုဖြစ်တယ်လို့သာ ဆိုခြင်ဘာဒယ် ဆရာမဒေါက်တာအီးတုံးခင်ဗျား
သူ့ကိစ္စသူလုပ်နေတာဂို ဓာတ်ဘုံရိုက်တဲ့ဆရာမဒေါက်တာ အီးတုံးမှာလည်းအပြစ်ရှိတယ်လို့
ဘုရား ဘုရား …..လန့် သွားတာဘဲ
တော်သေးတာပေါ့  ကျုပ် ပုံမဟုတ်လို့ ……………..။
နောက်နောင် ဒေါ်အိတုန် ဘယ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာ သတင်းပို့ပါ ဗျ
ဒီပိုစ့် လေးနဲ့ တွဲဖတ် ပါမှ .. အအီ ပြေ နိုင်မယ် ထင်တယ် ဗျို ….။
ကိုရင် ညှော်တယ်ဗျို့ ……..
လူမြင်ကွင်းမှာ တော်သလင်းဇာတ်ခင်းချင်လျှင်တော့ … မြန်မာတွေမျက်စိနဲ့ ရိုင်းနေမှာ အမှန်ပဲ ။
ကိုယ့်သမီး ကိုယ့်ညီမ ၊ ကိုယ့်အစ်မ ၊ ကိုယ့်တူမသာ ဒီလို ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးနဲ့ ခံစားကြည့် ….. ဖီလင်လေးတမျိုးပြောင်းသွားလိမ့်မယ် …. ။
ညှော်တယ်ဆိုလဲ မတတ်နိုင်ဘူး .. ဟိုဘက် ပိုစ့် နဲ့ ဒီဘက် ပိုစ့် က အဖွင့် နဲ့ အပိတ် ဖြစ်နေတယ်။ … comment ပိုင်ရှင် တွေ ရဲ့သဘောထားကို ဒီပို့စ် နှစ်ခု မှာမြင်နိုင်တာ မို့ .. တွဲ ပြ လိုက်တာ။ ကျုပ် ရဲ့ ဓာတ်ပုံ ပိုင်း (တဦးတည်း အမြင် သီးသန့်) နဲ့ ပြောရရင်တော့ … ဒီလို ဓာတ်ပုံ ရိုက်တဲ့ သူကို ရှုံ့ ချ ပါတယ်။ ဒါက ကင်မရာ အလွဲသုံးမှု မြောက်ပါတယ် ..။
ကင်မရာ အလွဲသုံးစားမှုမြောက်တယ်ဆိုပါလား … အားရို့ရို့ ……. စကားလုံးတွေ သိပ်မြောက်သွားပြီ … ။ တစ်ထွာတစ်မိုက် ကျွန်မဖြုတ်ဦးနှောက်ဥာဏ်လေးနဲ့ ……… လိုက်မမှီတော့ဘူး ။
လူတစ်ကိုယ်အကြိုက်တမျိုးမို့ ကြိုက်တာ မကြိုက်တာ ၊ လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲ ခွင့် ရှိပါတယ် … ။
ဒါပေသိ ပါဆယ်နယ်လ် ဖီလင်လေးတွေ မရော ယှက်လျှင်ပေါ့နော် …. ။
ပါစင်နယ် ဖီလင် မရောပါဘူး …. ဓာတ်ပုံ ပါ လာတာရယ် .. ဒါကို ပဲ တစ်ချို့  က သတင်း ဓာတ်ပုံ လိုလို ပြောနေတာ ရယ်ကြောင့်ဝင်မန့်တာ … ဟို စုံတွဲက လဲ ကျုပ်နဲ့ ဘာမှ မတော် ပါဘူး။ ဒီလို မျိုး သူတပါး ပုံကို ရိုက်ချင်သလို ရိုက်(ခိုး ၊ ပြောင်) ပြီး အသိမပေး ပဲ အင်တာနက် ပေါ် တင်တာကို ပါစင်နယ် အရ .. ရှုံချ လိုရင်း ပါ .. အဓိက က .. မျက်နှာ ပေါ် နေတာ .. အဲဒါ
ဟိုဘက် မင်းသား ပိုစ့် မှာတော့ ဓာတ်ပုံရိုက် တဲ့ (ရောင်းစားထားတဲ့) သူတွေကို ပြောထားပါကြောင်း
ဟုတ်ပ … သူတို့ ဘာလုပ်တန်း စော့နေတာလဲဟင်။
အဲလောက်လေးဆို၇င်တော့..လူတွေ.. ဖြည်းဖြည်းချင်းအမြင်ရိုးသွားပြီး.. ပေါ်ပျူလာဖြစ်ချင်လို့လုပ်သူတွေလည်း.. နည်းသွားမယ်ထင်မိတယ်..
ယူအက်စ်မှာ..ပါ့ဗလစ်မှာ.. စုံတွဲ.. နမ်းကြ..ဖက်ကြတာမဆန်းပါ..။
ကျုပ်ဆိုရင်တော့.. လူငယ်တွေ.. ချစ်ကြည်နူးနေကြတာတွေ့ရင်.. ကိုယ်ပါကြည်နူးမိတယ်..
မနက်မှာ.. လူငယ်စုံတွဲ.. နမ်းနေကြရင်.. မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လို့တောင်.. ထင်တာပဲ..
ပတ်ဝန်းကျင်က.. သတိပြုမိပြီး. အနှောက်အယှက်ဖြစ်ဟန်ရှိတာတော့..အမှန်..
ဒီမိုသဂျီးကတော့ အခုတစ်မျိုး တော်ကြာတစ်မျိုး ….. ခွိခွိ … ။
အရင်ပို့စ်တစ်ခုမှာတော့ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးက အဲ့မြင်ကွင်းမျိုးမြင်လို့ ရည်စားထားမယ် ပူဆာပါတယ်ဆိုပြီး အမေဖြစ်သူက တရားစွဲဆို …
အဲဒီပို့စ်မှာရေးခဲ့တဲ့.. .ကောမန့်… သေသေချာချာပြန်ဖတ်ပါကွယ်…
ရုပ်ရှင်..ဂိမ်းတွေမှာ.. Rating တွေထားတာအလကားမဟုတ်..
ပါ့ဗလစ်မှာ.. ကလေးမကြည့်ရ/ကြည့်နိုင် အဆင့်အတန်းတွေသေသေချာချာသတ်မှတ်ထားပါကြောင်း..
ဖက်တာ.. နမ်းတာလောက်နဲ့.. ဘာမှ..ဘာဆိုဘာမှ.. ပြသနာမတက်ကြောင်း..
kai says: (Edit)
သာမန်အားဖြင့် ဒီလို scenes တွေက.. ရုပ်ရှင်ထဲမှာပိုက်ဆံပေးကြည့်ရတာ..။ အပြင်မှာ အလကားဆားဗစ်ပေးပြနေတာ.. ၀ိုင်းကြည့်ကြပေါ့ကွယ်.. ဒါလေးများ..။
ကလေးတွေမကြည့်သင့်တဲ့အဆင့်ရောက်ရင်တော့.. ကလေးမိဘတွေက.. တရားစွဲပေါ့..။ ကင်မရာထုတ်ရိုက်.. တရားရုံးတင်ပေးလိုက်ပေါ့..
ကိုယ့်ကလေးက.. အဲဒါကြည့်ပြိး.. ရည်းစားလိုချင်တယ်.. ဖြစ်နေလို့.. အလုပ်ဖျက်ပြီး.. ထိမ်းသိမ်းလိုက်ရတာ.. ၁လအချိန်ကုန်သွားတဲ့အတွက်.. နစ်နာကြေး.. ကျပ် ၅သိန်းရလိုမှုနဲ့..တရားစွဲပေါ့..
အညိုးညိုးပဲ ….. နားဂိုလည်ဒေါ့ဝူး .. ခွိခွိ
ကလေးတွေမကြည့်သင့်တဲ့အဆင့် ဆိုတာကို.. ဘယ်လိုနားလည်ထားသလည်းဟင်င်င်… ?
ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကိုက.. “အတင်းလည်းမဟုတ် ၊ သတင်းလည်း မဟုတ်” တဲ့..
အဲဒီအပေါ်တင်လာတဲ့ စာတွေဓါတ်ပုံတွေကို.. မတင်သင့်ဘူးပြောနေတာမဟုတ်ဖူးနော..
လွတ်လပ်စွာတင်နိုင်ပါတယ်..ဒီကနေ.. ခေါင်းစဉ်တခုယူ ဆွေးနွေးနိုင်တာပဲ..
အဲဒီခေါင်းစဉ်ထဲ.. နိုင်ငံ၂ခုရဲ့..အမြင်..ယဉ်ကျေးမှုနှိုင်းပြီး.. ဆွေးနွေးကြည့်နေတာပါနော..
… နိုင်ငံ နှစ်ခု ယှဉ်ပြီး ဆွေးနွေးရလောက်အောင် …. တစ်ထွာတမိုက်လေးနဲ့ ဥာဏ်မမှီပါဘူး … ။ သဂျီးရယ် …. ။
နည်းနည်း ဖွလိုက်တာ … ထူးပြီတော့ … ပျားအုံ တုပ်နဲ့ ထိုးပလိုက်တာ … ဆွေတော်ရှစ်သောင်း မျိုးတော်ပေါင်းတွေ attack လုပ်ကြတယ်တော့ .. ပတ်သတ်သူက တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လာလျှင် ပုံဖျက်ပေးပါမယ်ဆိုမှ …
ကဲကြတဲ့ အတွဲတွေမြင်တိုင်း ရင်နာမိပါတယ်…
တန်ဘိုးရှိအောင်နေမှ မိမိချစ်သူ အပါအ၀င် အများက လေးစားကြမှာပါ…
ခုလဲ တန်ဘိုးမရှိ၊နောင်လဲ တန်ဘိုးမထားမို့ လေးစား ခံရဘို့ ဝေးပါလိမ့်မယ်…
kai ပြောသလို US လိုနိုင်ငံမျိုး၊ ကိုဂျော်နီပြောသလို သူ့အလုပ်သူလုပ်တာ ဆိုပေမဲ့
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာယဉ်ကျေးမှု၊ မြန်မာ့အမြင်မှာတော့ မတင့်တယ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း မီဒီယာတွေက ထုတ်လွှင့်မှုတွေရဲ့ အကျိုးဆက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့သလို ဒီမိုကရေစီရလို့ လွတ်လပ်ပြီဆိုပြီး
တတ်နိုင်သလောက် သား၊ သမီး၊ တူ၊ တူမ၊ ညီ၊ ညီမများကို ထိန်းမတ်ပေးစေချင်ပါသည်။
ဦး ပီချို ထောက်ခံပါတယ်ဗျို့ အရှေ့ နဲ့ အနောက် ယဉ်ကျေးမှုခြင်းကွာခြားလှပါတယ်။
အစ်မလေး တစ်ခါလေး ဆိုင်ထိုင်မိပါတယ် မ etone နဲ့ တွေ့တော့တာပဲ
ဟီးဟီး …. ဦးမိုက်ကို သမီး အိမ်မက်ထဲမှာတွေ့တာတောင် မှတ်မိပါတယ် .. … ဒီလို ပိစိညှောက်တောင့် သွားကြားထိုးတံ ဘော်ဒီရှိတ်နဲ့ ကောင်လေးမဟုတ်ပါဘူး … ဟီးဟီး
ဒါနဲ့ .. အချစ်ဦးကို မြေဦးရတဲ့အထိ မမေ့ဘူးဆိုပြီး ဘုရားဖူးတဲ့ အကြောင်းလေး …. ဟီးဟီး …. ဂျူနီယာကြီးမိုက်လေးတွေကို ဖွရမလား … မဒမ်ကြီးမိုက်ဆီ ဖွရမလား …
( အဖိုးကြီးလေသံဖြင့် )
သူကြီးသူကြီး တွေ့လား မြန်မာတွေခေတ်မှီပါတယ်။
ရက်စက်ပါပေ့ ကလေးတို့ ရယ်။ကျနော့်အသက် ၂၇မှာ ခုလိုရှက်ဖွယ်ခံစားရပါ၏
အင်းကျုပ်တို့ အမေကြီး ကားတိုက်မှာတော့ ဝီလိုဝီလိုရှီလယက်ဗြ မမဆိုလာ(ခ) အီးတုံး သူပုံပါကျွန်တော် နောက်နေ့တင်ပေးမယ် ကျွန်တော် ခိုးရိတ်ထားတာရှိတယ် ဗြဲ ပရိတ်သတ်ကြီြးိုကိုက်ရင် လက်ခုပ်တီးပါ ဖြောင်းဖြောင်း………